रुसले अन्तरिक्षमै परीक्षण गर्यो क्षेप्यास्त्र, ध्वस्त बनायो आफ्नै जासुसी उपग्रह! - Dainik Online Dainik Online
रुसले अन्तरिक्षमै परीक्षण गर्यो क्षेप्यास्त्र, ध्वस्त बनायो आफ्नै जासुसी उपग्रह!
प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७८, मंगलबार २ : ५१
विश्वका शक्ति राष्ट्रबीच शक्तिशाली हतियार बनाउने होड दशकौंयता चलिरहेको छ।
यसबीचमा रुसले भने हालै अन्तरिक्षमै क्षेप्यास्त्र परीक्षण गर्न भ्याएको छ। बीबीसीका अनुसार रुसले अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसन आईएसएस नजिकै क्षेप्यास्त्र सफल रुपमा परीक्षण गरेको छ।
आफ्नै एक जासुसी उपग्रहलाई रुसी क्षेप्यास्त्रले परीक्षणका क्रममा ध्वस्त बनाएको अमेरिकाले जनाएको छ। यो कार्यबाट अमेरिका रुष्ट बनेको छ। खबरअनुसार जब उपग्रह ध्वस्त बन्यो त्यसका टुक्राहरु आईएसएस नजिकै पुगेका थिए।
टुक्राहरुले लाग्ने त्रासका कारण आईएसएस भित्र अन्तरिक्षयात्रीहरु ज्यान बचाउन लुक्न बाध्य भएका थिए। हाल यस अन्तरिक्ष स्टेसनमा सात अन्तरिक्षयात्री छन्। चार अमेरिकी, एक जर्मन र दुई रुसी अन्तरिक्षयात्री यहाँ बसिरहेका छन्।
रुसले अन्तरिक्षमा क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेपछि अमेरिकाले यस कार्यलाई ‘खतरनाक र गैर–जिम्मेवारपूर्ण’ कार्य भनेको छ।
अमेरिकी विदेश विभागका प्रवक्ता नेड प्राइसले भनेका छन्,‘आज रुसले एन्टी–स्याटेलाइट मिसाइलको परीक्षण गरेको छ। उसले आफ्नै भूउपग्रह ध्वस्त बनायो। सो कार्यबाट १५ सय अधिक टुक्राहरु बनेका छन् जुन विश्वभरका देशको लागि खतराको विषय हो।’
रुसले ध्वस्त बनाएको भूउपग्रह सन् १९८२ मा अन्तरिक्षमा पठाइएको थियो। उक्त उपग्रहले जासुसीको काम गर्दथ्यो।
रुसले भने क्षेप्यास्त्र परीक्षण नगरेको र अन्तरिक्ष स्टेसनलाई जोगाउन त्यसो गरेको जनाएको छ। स्टेसनको कक्षमा सो काम नलाग्ने उपग्रह ठोक्किने त्रासका कारण त्यसलाई ध्वस्त बनाउनु परेको रुसी भनाइ छ। रुसले सो उपग्रह कोसमोस–१४०८ भएको बताएको छ।
अमेरिकाले भने रुसी कार्यले अन्तरिक्षमा रहेको सबै भूउपग्रहप्रति खतरा सिर्जना गरेको उल्लेख गरेको छ।